Imaanshiyaha Henrik ee Man United yaa faa’iido ku qaba yaase qasaare kala kulmi doono (Warbixin dhameystiran). | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Imaanshiyaha Henrik ee Man United yaa faa’iido ku qaba yaase qasaare kala kulmi doono (Warbixin dhameystiran).
Imaanshiyaha Henrik ee Man United yaa faa’iido ku qaba yaase qasaare kala kulmi doono (Warbixin dhameystiran).
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 30-06-16 1:18 PM Horaantii saakay ayey aheyd markii ay Sky Sports ay shaacisay in ciyaaryahan Henrik Mkhitaryan uu u jiro ku biirista kooxda Man United kaliya tijaabada caafimaadka hadana waxaa isa soo tarayo warar sheegayo sida ay ciyaaryahanada kusoo biira Man United saameyn ugu yeeshaan kooxda ka dhisan gegida Old Trafford.
Henrik ayaa u abuuray kooxda Borussia Dortmund 82 fursadoo xilli ciyaareedkii soo idlaaday ee 2015/16, waxa uuna 38 fursadood ka sareeyaa ciyaaryahanka ay ku duusha kooxda Marcus Reus.
Balse su’aasha ugu weyn ayaa ah ma ciyaaryahan waliba oo bandhig wanaagsan ka sameeyey kooxdiisa ayaa kara inuu isla bandhigaas oo kale uu ka sameeyo gegida Old Trafford.
Hadaba maqaal yar oo sharaxayo ciyaaryahanada ku guuleystay iney saameyn ku yeeshaan iyo kuwa ku guul darreystay ayaan halkan idin kugu soo bandhigeynaa.
Ciyaaryahanada ku guuleystay bandhiga wanaagsan
Rashford waa mid kamid ah ciyaaryahanada fara ku tiriska ah oo ay kooxda heshay kuwaas oo awooda iney rumeeyaan riyada kooxda, karana inuu sameeyo fursad.
Waa 18 sano jir waxaana lala barbardhigaa howsha uu man United u qabtay xilli ciyaareedkii tagay midka uu Pierre Emerick u qabtay kooxdiisa Borussia, balse Mourinho ayaa u muuqda mid aan ku kalsoonaan ciyaaryahanada da’da yar, Rashford waxa uu noqon doonaa hadii uu helo Henrik Mkhirtayan ciyaaryahan wax ku ool ah.
Kadib markii uu jebiyey rikoorkii u yaalay da’ yarta suuqa kala iibsiga ciyaaryahanada waxa uu kulankiisii ugu horeeyey muujiyey inuu yahay mid u qalma qiimahii ay United ka kasoo bixisay, Martial waxa uu noqday ciyaaryahanka ugu goolasha kooxda xilli ciyaareedkii tagay, balse niyad jabka ugu weyn ee uu kala kulmay kooxda ayaa ah inuu ku dhameystay kaalinta shanaad ee kala horeynta horyaalka Ingiriiska.
Anthony hada waa 20 sano jir guulo fara badan gacanta u geliyey kooxdii Van Gaal xilli ciyaareedkii tagay hadii uu helo Henrik waxa uu saameyn ugu yeelan karaa kooxda si ka sareysa sidii uu xilli ciyaareedkan ugu yeeshay xilli ciyaareedkii tagay
Waxa ay u muuqataa inuu si fudud ku iloowayo macalinka u dhashay dalka Portugal bandhigii wanaagsanaa ee uu sameeyey Matteo Darmian tan iyo markii uu kaga soo biiray Man United kooxda Torin xilli ciyaareedkii tagay, waxa uuna noqday ciyaaryahan fure labo afle ah waxa uu kaga ciyaaray Man United boosaska midig iyo bidix ee daafaca.
Balse hadii ay Mkhitarayan iyo Matteo isku baheystaan garabka waxa ay noqon karaan kuwa sameeya bandhig wanaagsan waxa ayna ka caawin karaan kooxda Jose Mourinho iney gaarto guulo wax ku ool ah xilli ciyaareedka ina soo aadan ee 2016/17 ka.
Ciyaaryahanada Bandhigooda uusan noqon mid guuleysta
Bandhig liita aanan aheyn midkii lagu yaqaanay ayuu Juan kusoo bandhigay xilligii tagay, balse imaanshiyaha Special One waxa uu soo afjari karaa mustaqbalka Mata ee Old Trafford, iyada oo ay taas jirto hadana Mata waxa uu sameeyey 53 fursadood oo gool loo filan karay.
64.4% fursadihii ay heshay kooxda Dortmund waxa ay ka yimaadeen ciyaaryahan Mkhitaryan balse ciyaaryahankan ku guuleystay xidiga ugu fiican Bundesliga ha waxa uu ciyaaray garabka midig isaga oo fursad u helayey inuu soo dhex jeexo daafacyada bidix ee kooxda kasoo horjeeda.
Balse Special One ayaa inta badan ciyaara shaxda 4-2-3-1 shaxdaasna uma muuqato inuu boos ka heli doono Juan Manuel Mata, wallow uu Mourinho ka dhawaajiyey inuusan dooneyn inuu ciyaaryahan ka diro kooxda ilaa uu isaga iska ceyriyo.
Adnan Januzaj waa ciyaaryahankii ugu horeeyey ee Man United u ciyaara hadana Follwo dhaha Bogga Instagram ka ee Henrik Mkhitaryan, waxa uuna sidoo kale u muuqdaa mid kusoo dhaweynayo gegida Old Trafford ciyaaryahankii ay 6 bilood isla wada joogeen gegida Signal Iduna Park.
Adnan ma uusan helin fursad uu nuskii dambe ee horyaalka Ugu soo muuqda Man United maadaama ay hareen dhaawacyo xidigan qaatay dhalashada dalka Belguim ka, taa oo lagu daray inuu boos ka waayey shaxda macalinkii hayaamay ee LVG.
Lingard waxa uu sameeyey la yaabyo fara badan hadana waxaa lagu daray liiska ciyaaryahanadii ku fashilmay iney wax badan kusoo kordhiyaan gegida Old Trafford, 23 sanno jirkan ayaa mar keyd u galayey Memphis marna fursad u helayey inuu ka ciyaaro garabka midig wallow Juan Mata uu ku heystay mararka qaar booskaas.
Jesse ayaa inta badan fasaxan ka faa’iideystay isaga oo bilaabay inuu jirkiisa dhiso si uu u noqdo ciyaaryahan awood leh wax ku oolna u noqda Jose Mourinho oo kooxda la wareegayo, hadii uu Mkhitaryan uu yimaado Man United waxaa soo idlaanayo riyadii uu Lingard ka qabay inuu boos joogta ka helo Man United.